किन घुर्छ मान्छे ? के हो समाधानको उपाय ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
किन घुर्छ मान्छे ? के हो समाधानको उपाय ?
घुर्नु आफ से आफ निस्कने एक प्रकारको आवाज, जो सुतेर निधाएको बेलामा स्वास लिँदा निस्कछ ।सामान्यतया निदाएको बेलामा घुर्र्नु कुनै रोगको परिभाषा भित्र पर्दैन ।किनकी यस्तो बेलामा घुर्ने मान्छेलाई न अप्ठेरो महसुस हुन्छ , न दुखाई महसुस हुन्छ , न खान नरुच्ने नै हुन्छ । उसले आफूबाट त्यसरी आवाज आएको छ भन्ने समेत पत्तो नै पाउदैन । यसले संगै सुत्ने वा नजिकै सुत्ने अर्को व्यक्तिलाई असर मात्रै पार्ने काम गर्छ ।
घुर्ने बारेमा पश्चिमा राष्ट्रमा रोचक तथ्य छ । ७०–८० को दशकमा बेलायतमा लोग्ने स्वास्नीबीच पारपाचुके निकै बढेर गयो । आफैले रोजेर प्रेम विवाह गर्ने संस्कृति बोकेको मुलुकमा यसरी एकाएक घरबार टुक्रिने कारण खोज्न राज्यले उच्चस्तरीय समिति बनायो त्यसबाट थाहा भयो ७५ प्रतिशत पारपाचुके हुनुको कारण त्यहि घुराई नै रहेछ । कारण थाहापाएपछि बेलायतीहरुले घुर्नुलाई पनि स्वास्थ्य समस्याको रुपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाए ।
पछिल्लो समयमा बैज्ञानिकहरुले घुराई आफैमा रोग नभएपनि रोगको संकेत हो भनेर भनेका छन् । बढी घुर्ने व्यक्तिमा कुनै न कुनैको समस्या हुन्छ भनेर जान्दा हुन्छ भन्ने बैज्ञानिकहरुको तर्क छ । त्यसैले बढी घुर्ने व्यक्ति आफ्नो स्वास्थ्यमा बढी चनाखो हुनु जरुरी छ ।
मुखको ठयाक्कै पछाडी भएको जिव्रो भन्दा माथि र तालुभन्दा तलको घाटीको भाग मुखे घाटी भन्छौँ । त्यस्तै त्यसभन्दा मुनी रुद्रघण्टी भन्दा पछाडीको अर्को भाग जसलाई नाकेघाटी भन्छौँ । यी भागमा कुनै पनि कारणले समस्या आएमा मान्छे घुर्न थाल्छ ।
कस्ता व्यक्ति बढी घुर्छन
–लिगलिगे मुखको भित्रि भागमा झुण्डीएको सानो मासुको भागमा समस्या भएका व्यक्तिहरु
–नाक भित्रको मासु सुन्निएको छ भने
–नाकको डाडी टेढो छ र स्वास फेर्न बाधा पुगेको छ भने
–नाकमा मासु पलाएको पालिक छ भने
–तालु प्यालेट सुन्निएको छ भने
–लिगलिगे मोटो भएमा
–मुखे घाटीको भाग साघुरियो भने
–नाकेघाटीको भाग साघुरियो भने
त्यसै गरी मानिसलाई घुर्ने बनाउने एक प्रकारको रोग पनि हुन्छ । त्यसलाई हामीले ‘स्लिप अप्नीया सिन्ड्रम’ वा ‘अक्सट्रप्टीभ अप्नीया सिन्ड्रम’ भनिन्छ । यो रोग लागेको व्यक्ति दिउसोमा पनि बढी निदाउने , बोल्दा बोल्दै छिटो निदाउने र घुरी हाल्ने गर्छ ।
यस्तै व्यक्ति भन्ने हुदैन । किनकी सबैको अंग एकैनासको हुदैन तर प्राय लोग्ने मान्छेमा बढी देखिन्छ । मोटो व्यक्ति, शारीरिक व्यायम नगर्ने व्यक्ति, मांसहारी व्यक्ति, सूर्तिज्यन्य पदार्थ तथा मदिराजन्य पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिमा यो समस्या बढेको पाइन्छ । एजेन्सी
समृद्ध सिन्धुली अभियानले ऐतिहासिक हरिहरपुरगढीलाई तत्कालीन गोर्खाली सेनाले अंग्रेजी सेनालाई परास्त गरेको सिन्धुलीगढीसँग जोड्ने पदमार्ग
सुनिता अधिकारी र प्रकाश सपुतको ‘लुरुरु हुरुरु’ टिक–टकमा पनि भाइरल
काठमाडौँ । समधुर स्वरकी धनी सुनिता अधिकारी र गायक प्रकाश सपुतको नयाँ दोहोरी गीत ‘लुरुरु
काठमाडौं । बुधबार कोकाकोलाको १३३ औं वार्षिकोत्सव, जसको इतिहास ८ मई, १८८६ मा शुरु भएको
काठमाडौं । आमरुपमा हृदयघात भनिने “एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्रयाक्सन”जीवन जोखीममा पार्ने अवस्था हो । जसमा मुटूको